Balarabe Musa: Nyenụ Ndigbo onyeisiala na 2019 - BBC News Ìgbò
Balarabe Musa: Nyenụ Ndigbo onyeisiala na 2019
17 Febrụwarị 2018
Nkenke aha onyonyo Balarabe Musa bụ onye anaghị ezo ọnụ ikwu ihe gbasara ịdịnaotu Naijiria
Balarabe Musa, onye nke kwuru nke a na mkparịtaụka ya na ụlọọrụ ntaakụkọ Sun nwere, kwuru na nke a dị mkpa n'ihi na o teele aka e ji agọnahụ ndị Igbo ọkwa onyeisisala.
Okwu ya: "Amaghị m ihe mere ndị Ugwu, ndị Odida-Anyanwụ na ọbụladị ndị Saụt-Saụt, jiri kpaa nkata na ọchịchị ga alọghachi n'Ugwu ugboro ugboro. Gịnị mere anyị ji agba okirikiri? Ndị Ugwu anọọla n'ọchịchị ọtụtụ oge. N'ime mmadụ iri chịrị dịka onyeisiala, e chere m na asaa si na Ugwu, otu si na Ọdịda-Anyanwu, otu si na Saụt-Saụt, ma e nweghị onye si Ọwụwa-Anyanwụ."
Gịnị mere na o nwebeghị onyeisiala si Ọwụwa-Anyanwụ?
Balarabe Musa kọwara na 'ndị ọnụ na-erụ n'okwu n'Ugwu na Ọdịda-Anyanwu na-atụ egwu na Igbo ọnụ na-eru n'okwu kwenyere na ọchịchị onyekwuoucheya na ihe onye-ketere-ya-rie, karịa ndị Ugwu na ndị Ọdịda-Anyanwụ'.
Ọ gara n'ihu jụọ, "gịnị mere na a gaghị esoro usoro iwu onye-keta-ibe-ya-eketa (National Character) ma nye ndị Igbo ọchịchị ugbua? A na m ekwu 'nye,' maka na nke a abụghị okwu ntuliaka ndị mmadụ."
Ka Balarabe Musa na ndị ntaakụkọ Sun na-ekwu, ọ sị na ya ekwetaghị na ọ bụ maka na Ndigbo na-ekwu okwu ka e nye ha Biafra ka e jiri jụ inye ha ọchịchị.
Ọ sị: "Ọ bụghị maka na Ndigbo na-ekwu ka e nye ha ala nke ha. Ndigbo ka kwenye na Naịjirịa karịa ndị Ugwu maọbụ ndị Ọdịda-Anyanwụ n'ihe gbasara nkwalite ịdịnaotu nke Naịjirịa. Nke a bidoro tupu afọ 1950. E kwuwe okwu agbụrụ, Ndigbo kachasị na-akwalite ịdịnaotu nke ala anyị. Onweghị mgbe ha kwuputara okwu nwere onwe ha karịa ka alụchara Agha n'ihi ihe Agha mere. Ha ka kwenye n'otu Naịjirịa karịa ndị Yoruba na ndị Awụsa ndị bụ ndị chọrọrị nkewa."